Jordania: Mety Hitarika amin’ny fialàn’ain’ny Governemanta Arabo maro Hafa ny Fanoherana Toniziana · Global Voices teny Malagasy
Jordania: Mety Hitarika amin'ny fialàn'ain'ny Governemanta Arabo maro Hafa ny Fanoherana Toniziana
Voadika ny 14 Janoary 2011 3:58 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Raha kely indrindra dia 23 ny olona maty tamin'ny sahotaka tao Tonisia, miaraka amina herisetra mitranga isan'andro sy ny fampiasàan'ny polisy entona mandatsa-dranomaso ary bala tena izy mba hifehezana ireo mpanao fihetsiketsehana izay mihetsika manohitra ny tsy fananana asa, ny sondrom-bidin'ny solika sy ny sakafo ary ny tsy fisian'ny fahalalahana ara-politika. Arakaraky ny itohizan'ny herisetra, dia toy izany koa ny valin-kafatra sy ny fanehoan-kevitra ao Jordana.
Maro ireo Jordaniana mpampiasa twitter no nifantoka tamin'ny fanakianana ny Filohan'i Tonizia , Zine El Abidine Ben Ali.
Hamzeh Lattouf nanoratra hoe:
Maninona ny Filoha Toniziana no niandry mandra-pipoaky ny hetsi-panoherana #sidibouzid vao nampanantena asa hatramin'ny 300.000 ?! #TSYALEHANY (#FAIL)
Tao anaty kabary iray nalefa tamin'ny fahitalavitra ny 10 Janoary, Ben Alidia nampanantena fa asa vaovao 300,000 no ho foronina eto amin'ny firenena ato anatin'ny roa taona manaraka izay heverina fa ny 55 isan-jaton'ny mponina ao aminy dia latsaky ny 25 taona, ary ny tahan'ny tsy fisian'ny asa dia manodidina ny 15%.
Samih Toukan dia nampiseho fanantenana fiovàn'ny fitantanana ateraky ny fanoherana:
Hetsiky ny very fanahy nataon'i Ben Ali.tsy ampy.tokony hiala izy ary hiatrika fitsaràna! #sidibouzid
Samar Dahmash Jarrah nanontany amin'ny fomba mananihany:
Ry Filoha Bin Ali malalako, tena tapaka tanteraka ve ny fifandraisanao amin'ny vahoaka sy ny firenenao? Inona no hevitrao mikasika ny fialantsasatra mahafinaritra lavabe any Florida ka izaho no handoa ny lany?
Ny hafa maneho firaisankina amin'ireo vahoaka Toniziana, toy ny tweet nalefan'i Mohammad Yousef:
Ho ela velona i Tonizia http://youtu.be/iG7039-WRR8 #Kreator #Nowplaying cc: @Cer @3arabawy @maggieosama @Gsquare86 @miqla3
Norma Saqer dia nanentana firaisankina ara-pinoana:
Tsy afa-manao na inona na inona mivantana ve ho an'ny mangirifiry toa an'i #Tunisia #Palestine #Iraq #arab ? ankehitriny-afaka-ianareo, mivavaha ho azy ireny, #Andriamanitra hihaino anareo 🙂 #JO
Ny sasany nandefa tweet momba ny fiaretan-tory hatao ny 13 Janoary 2011 manoloana ny masoivohon'i Tonizia ao Jordania, antsoina hoe “Fitsaharana am-pahanginana ho an'i Tonizia ao Jordania!”
Maro tamin'ireo Jordaniana no nampifandray ny zava-mitranga ao Tonizia amin'ny raharaha mafampàna any amin'ny tany Arabo hafa. Sheeshany nanontany:
Tahaka ny inona ny halavirantsika “#jo” miala avy any #Tunisia & #Algeria?
Naseem Tarawnah nandefa tweet:
Manontany tena aho raha toa ny governemanta arabo ka handefa “fanohanana” hanampiana ny governemanta toniziana tsy hidaraboka & sy hisorohana ny mety ho fiitàran'ny vokany (Avy amin'ny mpandika: toy ny effet domino, daomy atsangana ka rehefa voadona ny iray dia midaraboka ny rehetra)? #JO #tunisia #sidibouzid
Mohammad Yousef nandefa tweet mikasika ny hetsika ao Libanona, nanoratra fa ny fisintahan'ny Hezbollah tsy ho ao amin'ny governemanta koa dia mametraka an'i Libanona ho amin'ny làlan'i Tonizia mankamin'ny hetsi-panoheran'ny vahoaka:
mirotsaka an-tsehatra i #Libanona: toherina ny fanesorana ny misitra avy aminy ao amin'ny gov. Androany ry http://bit.ly/iakhXQ #Algeria #Sidibouzid #Jordan #Tunisia
Ireny tweets ireny, sy ny maro hafa, dia mihevitra fa ny korontana misy ao Tonizia sy Alzeria dia mifandray amin'ny raharaha mafampàna ao Jordania. ary ireny fanehoan-kery ireny dia mety hanome hevitra ny vahoaka any amin'ny firenena Arabo hafa hangataka fanavaozana ara-toekarena sy ara-politika.
Araho ny fifanakalozan-dresaka amin'ny tenifototra #sidibouzid ao amin'ny Twitter hahazoana ny vaovao farany sy ny fanehoan-kevitra mikasika ny zava-mitranga any Tonizia ary ny pejy fandrakofana manokana ataonay eto.